सिल्टल: स्प्याम बोट के हो र यसलाई रोक्न कसरी
यदि तपाईंले Google Analytics खातामा लग इन गर्नुभयो र सत्रहरूमा अचानक स्पाइकहरू देखाउनुभयो, संभावनाहरू छन् कि बोट्स र रेफरल स्प्यामले तपाईंको वेबसाइटमा हिसाब गरेको छ। एक झलकमा, तपाईंलाई महसुस हुन सक्छ कि यसले तपाईलाई बिक्री र नेतृत्व पाउनेछ, तर सत्रको स्रोतमा हेरिरहनु भएको छ तपाईले एक विचार दिनुहुनेछ जहाँ यातायात आउँदैछ। स्प्याबोट्सहरू कम-गुणस्तरका लागि मुख्य रूपमा जिम्मेवार छन् वेबसाइट ट्राफिक । हालको सातामा, अधिक वेबमास्टर्सहरूले शिकायत गरेका छन् कि रेफरर स्प्याम बटहरू आफ्नो साइटहरू क्रल गर्न सक्छन् र जस्तो देखिन्छ कि वास्तविक व्यक्तिहरूले तपाईको वेब पेजहरू भ्रमण गरेका छन्। कालो टोपी एसईओ र नकारात्मक स्प्याम बटहरू तपाइँको गुगल एनालिटिक्स डेटा ठूलो संख्यामा लुकाउन सक्छन्। यसबाहेक, यी बटहरू देखा पर्दा उनीहरूले तपाईको साइट धेरै पटक भ्रमण गरे तर उछाल दर 100% हो। तपाईं कुनै पनि सकारात्मक डेटा प्रदान गरिएन, र तपाइँको साइट को रैंकिंग दिन देखि घटाइन्छ।
स्प्याम बोट के हो?
फ्रैंक निदान, सेल्टल्ट ग्राहक सफलता प्रबन्धकले बताउँछ कि बटहरू स्वचालित कार्यक्रम हुन् जुन कुनै पनि म्यानुअल इनपुट बिना कार्यहरू कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छ। एक बोटले केही कार्यहरू पूरा गर्न जिम्मेवार छ जुन एक वास्तविक व्यक्ति घण्टार, दिन वा हप्ता भित्र पूर्ण हुन सक्दछ। एक समय मा धेरै कार्यहरु पूरा गर्न को लागि केवल केहि सेकेन्ड को आवश्यकताहरु को लागी बोट्स को आवश्यकता हो र तपाईंको साइट को अनैतिक रूप देखि यात्रा गर्न को लागि बनाईएको छ।
अवैध र वैध बूटहरू बीचको भिन्नता
वैध वा वास्तविक बटहरू सर्च इन्जिन को जस्तै Bing, Yahoo, र Google को हो। उनीहरूले तपाइँको वेबसाइट अनुक्रमणिका गर्न सक्छन् र खोज इन्जिन परिणामहरू मा तपाईंको सबै पृष्ठहरू देखाउँछन्। यी बटहरू तपाईंको साइटलाई कुनै पनि तरिकामा हानि गर्दैन, जबकि अवैध बटहरू तपाईंको वेबसाइटमा हानिकारक हुन हो।.यो जस्तो देखिन्छ कि तिनीहरू तपाईंको साइटमा जान्छन् र तपाईले धेरै विचारहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तर तिनीहरू साइट-अनुकूल होइनन् र नकारात्मक बोटहरू भनिन्छ। सबै भन्दा साधारण र प्रसिद्ध स्प्याम रेफरल बट ईवेंट-tracking.com हो, free-share-buttons.com, social-buttons.com, darodar.com, र get-free-traffic-now.com।
यी वेबसाइटहरू वरिपरी केही भिन्नताहरू छन्, र तिनीहरूका URL हरू स्वतः Google Analytics खातामा देखा पर्छन्। यदि तपाइँ यी कम्पनीहरू र उनीहरूको विज्ञापन प्याकेजहरूको बारेमा थप जान्नका लागि उनीहरूको URL हरू पालन गर्नुहुन्छ भने, उनीहरुले तपाइँको वेबसाइटलाई हानिकारक बनाउनेछन्। उदाहरणका लागि, यदि तपाइँ आफ्नो गुगल एनालिटिक्स खातामा एक सन्दर्भ स्प्याम (हेर्नुहोस्-your-website-here.com) देख्नुहुन्छ भने, तपाईंले यसलाई सकेसम्म चाँडै हटाउनुपर्दछ।
तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खातामा स्प्याम बट कसरी ब्लक गर्ने?
प्राय सबै सबै स्प्याम रेफरल साइटहरू ठूलो अपमानजनक छन् र छिट्टै छिटो हटाउन सकिन्छ। यदि तपाइँ आफ्नो गुगल एनालिटिक्स खातामा नयाँ रेफरल स्प्याममा आउँनुभयो भने, तपाईले यसलाई फिल्टर गर्नु पर्छ, तर यो प्रक्रियाको उल्टो पक्षले खराब बटहरू फेरि तपाईंको वेबसाइटमा भ्रमण गर्नेछ। यसको अर्थ तिनीहरूले तपाईंको सर्भरको स्रोतहरू लिनेछन् र तपाईंको साइटको लोडिङ गतिलाई असर गर्नेछ। यद्यपि, सबै स्प्याम वेबसाइटहरू ब्लक गर्नको लागि .htaccess फाइल प्रयोग गर्न सम्भव छ। यो लायक छ कि hthtcess फाइल एक संदिग्ध तरिका हो कि संदिग्ध साइट को ब्लक गर्न को लागी। पहिलो चरण तपाईंको .htaccess फाइलमा निर्दिष्ट कोड सम्मिलित गर्न हो। यदि यो फाइल सही काम गरिरहेको छैन भने, तपाईंले डोमेनको मूलमा नयाँ .htaccess फाइल अपलोड गर्नुपर्छ।
स्प्याम बट को तय गर्न को लागी एकदम द्रुत र आसान तरीका तपाईंको गुगल एनालिटिक्स अकाउंट मा उन्नत फिल्टर बनाएर हो। तपाईको खातामा लग इन गर्नुहोस् र व्यवस्थापक ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्। यसबाट, तपाईं नयाँ दृश्य विकल्प सिर्जना गर्न जानुपर्छ, र रिपोर्टिङ दृश्य नाम सेक्शनमा, तपाइँ स्प्याम नि: शुल्क बटन देख्नुहुनेछ। यहाँ तपाइँलाई नयाँ फिल्टर विकल्पमा क्लिक गर्नु पर्दछ र तपाईंको फिल्टर नाम नबिर्सनुहोस्।